Ny mpanjifa manankarena dia mitady fikarakarana mpanjifa ara-tsosialy | Martech Zone
Alatsinainy, May 12, 2014 Alatsinainy, May 12, 2014 Douglas Karr
Paikady marketing ara-tsosialy lehibe no tokony hampidirina ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Orinasa maro no manavaka azy roa, fa ny mpanjifanao kosa tsy mba manana fisarahana toy izany. Raha vantany vao mifanerasera ianao dia hampiasa an'ity fantsona ity ho an'ny fanontaniana, hevitra ary fitarainana. Ny vaovao tsara dia ny ahafahanao mampiseho ny fahaizanao amin'ny serivisy ho an'ny daholobe ampahibemaso, amin'izay -barotra hatraiza ny fahaizanao manao izany amin'ny fanantenana.
Ny mety tsy tsapan'ny orinasa dia ny mpanjifanao manana teti-bola lehibe indrindra Aleo ny fikarakarana ara-tsosialy sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Avelao hilentika kely io…
Ireo be karama indrindra dia mampiasa ny tambajotra sosialy ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ireo orinasa tsy manararaotra manararaotra izany dia tsy mahita fotoana hanatsarana ny traikefa amin'ny marika sy hitombo. McKinsey & Company
Ny orinasa dia mila mampiditra ny paikadin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ao amin'ny paikadin'ny media sosialy izay manitsy sy mamaha ny olana amin'ny serivisy haingana araka izay tratra. Ny famelana ny olana hikorontana dia hanimba ny fahefanao sy ny fitokisana takiana mba hamadihana ireo mpanjifany sy mpanjifa ho mpankafy.
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifainfographic amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifaSary torohayMcKinseyMcKinsey & Companyfikarakarana ara-tsosialyserivisy ho an'ny mpanjifa sosialyharena
Ny fitaomana dia momba ny fiovam-po fa tsy ny fanatrarana